साढे दुई वर्षमा यी राशिमा आउँदैछन् शनिदेव, प्रकोपबाट बच्न अपनाउनुहोस् यी उपाय ! - Mitho Khabar
April 27, 2022 mithokhabarLeaveaComment on साढे दुई वर्षमा यी राशिमा आउँदैछन् शनिदेव, प्रकोपबाट बच्न अपनाउनुहोस् यी उपाय !
उज्यालो नेपाल भक्तपुर ,
शनि राशि परिवर्तन 2022: शनिदोषबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि वैशाख महिना धेरै विशेष छ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार यो महिना शनिको राशि परिवर्तन हुँदैछ । साढे दुई वर्षपछि वैशाख २९ गते शनि मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ । जानौं कुन राशिका लागि शनिको यो परिवर्तनले समस्या निम्त्याउँछ । साथै शनिको राशि परिवर्तनका कारण कुन-कुन राशिलाई शनिको दशबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
यी राशिका व्यक्तिहरुको कठिनाइ बढ्नेछ
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार शनिको यो परिवर्तनले कर्कट र वृश्चिक राशिका व्यक्तिमा साढे दुई वर्षको दशै सुरु हुनेछ । साथै, मीन राशिमा शनिको अर्धशतक सुरु हुनेछ। अर्कोतर्फ मिथुन र तुला राशिका मानिसहरूले शनिको दह्याबाट मुक्ति पाउनेछन्। जबकि धनु राशिका मानिसहरु सदेशतीबाट मुक्त हुनेछन् ।
शनिदेव कुम्भ राशिमा आउनेछन्
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार शनिदेवको अर्धशताब्दी जस्तै धैयाले पनि मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ । साडे सतीको अवधि साढे सात वर्ष र धैयाको अवधि साढे दुई वर्ष हुन्छ । यस समयमा शनिदेव मकर राशिमा हुनुहुन्छ र राशि परिवर्तन गरेपछि उहाँ कुम्भ राशिमा आउनुहुनेछ।
शनिदोषबाट छुटकारा पाउन के गर्ने ?
शनिदेवको प्रकोपबाट मुक्ति पाउन चैत्र नवरात्रीको अष्टमी तिथिलाई विशेष मानिन्छ । यसलाई महाअष्टमी पनि भनिन्छ । यस दिन माँ महागौरीको पूजा गर्ने विधि छ । महागौरी माताको पूजा गर्नाले शनिको पीडाबाट मुक्ति मिल्ने जनविश्वास रहेको छ । यस्तो अवस्थामा यस दिन दुर्गा चालिसाको पाठ गर्नुहोस्। शनि चालिसा र हनुमान चालिसाको पाठ पनि गर्नुहोस्। यसका साथै साँझ पिपलमुनि तोरीको तेलको दियो बाल्नुहोस् ।